पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अनशनमा
पर्वत / पैंयँु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जसमति गुरुङको राजीनामा माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जनप्रतिनिधि आजदेखि अनिश्तिकालीन अनशन बसेका छन् । गाउँपालिका– ४ हुवासमा जनप्रतिनिधिले अनशन शुरु गरेका हुन् । वडाध्यक्ष
सरकार र डा. केसी पक्षबीचको वार्ता सहमति नजिक, आजै अनसन तोडाउने तयारी
काठमाडौं । सरकार र अनसनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । विहिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहरबारमा भएको सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्षबीच भएको सहमतिलाई
डा. केसीको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक, आजै सहमति हुने सम्भावना !
काठमाडौँ। बुधबार बिग्रिएको सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीचको वार्ताको वातावारणमा आज सकरात्मक प्रगति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओल , नेकपाका नेता सुबास नेम्वाङ्गसहित डा.केसी पक्षका केहि सदस्य बीच सकारात्मक
डा. केसी अनसन प्रकरण : वार्ता किन निष्कर्षमा पुगेन ?
काठमाडौँ । सरकारी र डा. गोविन्द केसी पक्षको वार्ता विना निष्कर्षमा पुग्न सकेन । वार्ता निषकर्षमा नपुग्नुमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। बुधबारको वार्ता पछि दुवै पक्षले विज्ञप्ति